China Humic Acid orinasa sy mpamatsy | Lemandou
Ny asidra humic dia mety amin'ny karazana zavamaniry rehetra, toy ny voly, legioma, voankazo ary voninkazo. afaka manatsara ny asan'ny anzima isan-karazany izy, manatsara ny hamafin'ny fotosintesis sy ny fifohana rivotra. Noho izany, ny voankazo dia ho voaloko mialoha, hahazoana vokatra avo sy lanja avo.
Zava-boahary (fototra maina)
Ny asidra Humic dia nalaina avy amin'ny leonardite mineraly. Izy io dia fifangaroan'ny fambolena organika makrômolecular namboarina aorian'ny famotehana ny zavamiaina bitika sy fanovana ny zavamaniry, ary avy eo dia miatrika fihetsiketsehana geochemical maharitra. Manana fiasa avo sy fahombiazan'ny zezika maharitra izy io. Izy io dia mety amin'ny karazan-tany rehetra, indrindra ny tany alkaly. Izy io dia nampiasaina indrindra ho toy ny mpitrandraka tany voajanahary na zezika ifotony ary mety amin'ny fambolena voajanahary. Ny singa lehibe amin'ny asidra humic dia ny karbaona, ny hidrôzenina, ny oxygen, ary ny azota sy solifara kely. Ho fanampin'izany, misy vondrona miasa marobe, toy ny quinone, carbonyl, carboxyl, enol vondrona.
1. Manatsara ny firafitry ny tany.
Ny asidra humic dia afaka mampiroborobo ny fananganana firafitra mitambatra amin'ny tany, manatsara ny rano anaty sy ny fahafahan'ny zezika ary mampiroborobo ireo hetsika mikraoba bitika amin'ny tany. izy io dia afaka mampitombo ny bakteria aerobic, actinomycetes, ary bakteria decompose cellulose, manafaingana ny famotehana sy ny fanovana ny zavatra biolojika, mampiroborobo ny famoahana otrikaina ary manamora ny fitrohana ireo otrikaina amin'ny voly.
2.Hatsarao ny fanoherana ny hatsiaka
Ny fampiharana ny asidra humic dia misy vokany miharihary amin'ny fiakaran'ny zana-ketsa sy ny fanoherana mangatsiaka. Rehefa sendra hafanana ambany sy toetr'andro orana ny zavamaniry, dia mitranga matetika ny zana-ketsa maty sy zana-kazo lo. Aorian'ny fampiharana azy, mihamitombo ny mari-pana amin'ny tany, ary manatsara ny kalitaon'ny zavamaniry amin'ny ankapobeny, izay afaka mampihena ny fahasimban'ny hatsiaka amin'ny ambaratonga samihafa.
3. Manatsara ny fanoherana ireo bibikely sy aretina
Ny asidra humic dia afaka mifehy tsara ny bibikely sy ny aretina, ny aretin'ny zavamaniry ary ny mikraoba. Ny asidra humic dia misy fisorohana mazava sy vokadratsy bakteria amin'ny lohan'ny hazo fihinam-boankazo, ravina ravina, aretin'ny ravina mavo, ahidin'ny kôkômbra, sns.
4. Manatsara ny fanoherana ny haintany
Ny asidra humic dia afaka mampihena ny fisokafan'ny ravina zavamaniry, mampihena ny fifindran'ny ravina, mampihena ny fanjifana rano, manatsara ny toetran'ny rano ao amin'ny vatan'ny zavamaniry, mampitombo ny atin'ny rano ravina.
5. Mandrisaha ny fitomboan'ny vokatra
Ny asidra humika dia misy vondrona vondrona miasa simika sy biolojika maro karazana, toy ny vondrona hidroksil sy karboksyl, izay afaka mandrisika ny fitomboana sy ny fivoaran'ny voly. izy io dia afaka mampitsiry aloha ny voa, mipoitra aloha, voninkazo aloha ary mametraka voany aloha. Vitalité, manatsara ny fahafahan'ny fakan'ny voly mandray otrikaina sy rano.
6. Manatsara ny kalitaon'ny voankazo.
Ny asidra humic dia mety mamorona komplekana na chelate compound miaraka amina singa soritra, mampitombo ny isan'ny singa manara-dalàna mihetsika avy amin'ny faka
ny ravina na ny faritra hafa. izy io dia afaka manitsy ny tahan'ny fifandanjana sy ny fifandanjan'ny makroelement ary ny soritry ny singa, ary manamafy ny anzima ho an'ny siramamy, starch, Synthesis ny proteinina, tavy ary vitamina isan-karazany.
Previous: Humasy potasioma
Manaraka: NPK Granular